Granules umbhobho lokulinganisa Compound
Iikhompawundi ze-PVC ezikwabizwa ngokuba ngumxube owomileyo zisekwe kwindibaniselwano ye-PVC resin kunye nezongezo ezinika ulwakhiwo oluyimfuneko ekusetyenzisweni kokugqibela. Indibano yokurekhoda uxinzelelo lokongezwa isekwe kumacandelo ikhulu le-PVC resin (PHR). Iikhompawundi ze-PVC zinokwenziwa ngezixhobo eziguqukayo zisebenzisa iplasticizer, ebizwa ngokuba ziiPlastiki ezenziwe ngeplastiki kunye nokusetyenziswa okungqongqo ngaphandle kweplasticizer ebizwa ngokuba yi-UPVC. Ngenxa yomgangatho wayo olungileyo, uqinile kwaye ulungile ...
Izinto zePvc zokuShicilela ukuPakisha kunye neLable Printing Film
Ifilimu ye-PVC Shrink -Uhlobo lokugoba okusetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zezicelo. Ezifana nenyama entsha, iinkukhu, imifuno, iincwadi, ukutywina amanzi amaminerali kunye neebhotile zamayeza, iziselo, iikhemikhali zemihla ngemihla, amayeza, ibhiya kunye neelebheli njl. IPolyvinyl chloride yiplastiki yesithathu eveliswe kakhulu emhlabeni. Zimbini iifilimu ze-PVC: Ilebheli yokuPrinta yeBakala Ifanelekile ukuvelisa okanye ukuprinta imikhono yokuncipha kunye neelebheli. Ifilimu yePVC icacile, inzima ...
Iimveliso zePvc zecingo kunye nokuCocwa kweCable
Iikhompawundi ze-Cable PVC zizinto ze-thermoplastic ezivela ekuqhubekeni nokuqanjwa kwe-polyvinyl chloride, eveliswa njengegranules. Iipropathi ezahlukeneyo zinikezelwa kwiikhompawundi kuxhomekeke kusetyenziso kunye neemeko zokusebenza kwento. Iigrafu ze-PVC ze-Cable zisetyenziselwa intambo kunye nomzi mveliso wokuqhuba ubushushu kunye nocingo olukhuselayo kunye nebhatyi yesheath cable. I-PVC ngokubanzi i-Sheathing yeBanga leKhompawundi yenziwa kusetyenziswa izinto eziphambili ze-PVC eziyinyani, ngokuthobela i-RoHS (Heav ...